Allgedo.com » 2013 » February » 16
Home » Archive Daily February 16th, 2013
Sh. Xasan Daahir Aweys oo ka hadlay dilkii Sh. Cabdulqaadir (Daawo Video)
Sh. Xasan Daahir Aweys oo ka tirsan mas’uuliyiinta sar-sare ee Urur diimeedka hubeysan ee Al-shabaab ayaa si adag uga hadlay dilkii galabnimadii shalay masjid ku yaala magaalada Garoowe loogu geystay Allaha u naxariistee Sh. Cabdiqaadir Nuur Faarax. Sh. Daahir ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay dilka loo geystay Sh. Cabdiqaadir oo ay muddo aad u dheer is yaqiineen, asaga oo dhanka kalena dilka...
Saraakiil Ciidan oo ka Socotey Dalka Turkiga oo la kulmay Saraakiisha Milatariga Soomaaliya
Saraakiil ciidan oo ka socotay dowladda Turkiga oo maalmahanba ku sugnaa Magaalada Mugdisho ayaa maanta la kulmay saraakiisha ugu sareyso ciidamada militariga Soomaaliya. Kulanka oo uu goob joog ka ahaa wasiirka gaashaandhiga soomaaliya C/xakiin Xaaji Maxamuud fiqi ayaa markii uu soo idlaaday waxa ka warbixiyay wasiirka gashandhiga soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay inay saraakiisha ladaba dhinac ay...
Ra’isal Wasaaraha Soomaaliya oo Balan qaadey Ruuxii soo Sheega Qof Diley Wariye in la siin doono 50 kun oo Dolar
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa maanta kulan wuxuu la qaatay agaasimayaasha warbaahinta dalka Soomaaliya, kaasi oo ka dhacay xafiiskiisa. Kulanka oo ahaa mid Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ku xog wareysanayayay Agaasimayaasha Warbaahinta, ayaa waxaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya halkaasi uu ka jeediyay balan qaad wanaagsan. Ugu horeyn, Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda...
Faah Faahin dheeraad ah oo ka soo Baxaysa Qarax ka dhacay Maqaayada ku Taa Taala Xeebta Liido.
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax ka dhacay afaafka hore ee Baar liido ee Magaalada Muqdisho,Sida ay ku waramayaan Goob joogayaal ku sugnaa Goobta uu Qaraxa uu ka dhacay Qaraxa ka dhacay Baarka ayaa loo adeegsadey Gaari laga soo buuxiyey Walxaha Qarxa. Qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay meel banaanka ah oo gaadiidka la dhigto halkaasi oo ay ku gubteen gaadiid nooca raaxada ah oo gaaraya ilaa...
Talyaaniga oo ka hadley Tababar Ciidamo ka tirsan Dowlada Jabuuti uga furmay
Dowlada Talyaaniga ayaa si weyn u soo dhoweysay tababar uga furmay dalka Jabuuti ciidamo ka tirsan Dowladda oo gaaraya 200,kuwaasi oo ka mid ah Boliiska Soomaaliya oo rag iyo Dumar ku jira. Danjiraha Talyaaniga u qaabilsan Soomaaliya Andrea Mazzella ayaa ku tilmaamay tababarka mid qeyb ka ah isbadalada dhanka horumarka ah ee la doonayo in lagu sameeyo ciidamada ammaanka dalka,islamarkaana kor loogu...
Banaanbax Balaaran oo lagu taageerayo is dhexgalka Bulshada oo ka soconaya Magaalada Muqdisho
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka socda Banaanbax ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen maamulka Gobalka Banaadir kaasi oo ay kasoo qeybgaleen Boqolaal dadweyne ah. Banaanbaxa oo ka socda beerta Nabadda ee Degmada Xamarweyne ayaa waxaa kasoo qeybgalay shacab ka socda 17-ka Degmo ee Gobalka Banaadir. Masuuliyiin ka tirsan maamulka Gobalka Banaadir ayaa kasoo qeybgalay Banaanbaxa iyo masuuliyiin...
Kenya oo shaki gelisey in Alshabaab ay Dileen Askari Kenyan ah.
Colonel Cyrus Oguna Afhayeenka Malitariga Kenya,oo wareysi siinayay Idaacada Capital FM ee Nairobi ku taalo ayaa wareysigiisu wuxuu ku wajahnaa hadalkii qoraalka ahaa ee ka soo baxay Al-shabaab ee ku aadanaa dilka ay u geysteen askariga ka tirsan dowlada Kenya. Wuxuu cadeeyay Afhayeenka Malitariga Kenya in askariga shabaab ay sheegeen inay dileen uu ka mid ahaa ciidamadooda,balse waxuu sheegay inaysan...
Gen. Cabdulaahi Sh. Ismaaciil oo sheegay in hadalka kasoo yeeray Maxamuud Sayid Aden uu yahay feker shaqsiyadeed (Dhageyso)
Kaddib markii maalintii shalay aheyd ay mas’uuliyiin kasoo jeeda gobolka Gedo oo uu ka mid yahay Maxamuud Sayid Aden ay ka hor yimaadeen qorshaha socda ee maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, ayaa waxaa maanta markiisa Gen. Cabdulaahi Sh. Ismaaciil asaga oo saxaafadda la hadlaya sheegay in uusan ogeyn wax qilaaf ah oo u dhaxeeya bulshada ku dhaqan gobolka Gedo, balse taas badalkeeda...